ကား, Crossover ရောင်းရန် Carmudi Myanmar [Burma]
Black Toyota Wish 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Silver Toyota Wish 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Pearl white Toyota Wish 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်းလြုံ...
Silver Toyota Wish 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Black Toyota Wish 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Pearl White Toyota Wish 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Pearl white Toyota Wish XS 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ...
Pearl White Toyota Wish 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပ...
Black Toyota Wish 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည...
Black Toyota Wish 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါ...
Black Toyota Wish 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါ...
Black Honda Airwave 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Orange Honda Airwave 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Black Honda Airwave 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Silver Toyota Raum 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြတင်...
Pearl white Toyota Wish 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မ...
Pearl White Honda Airwave 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
ပြည်တွင်း ဈေးကွက်ရ အောင်မြင်နေတဲ့ အိမ်စီးကားများ
ပြည်တွင်းရဲ့ ဈေးကွက်တွေထဲ၊ လမ်းတွေထက်မှာ အတွေ့ရများပြီး အစီးရေများကာ အသုံးပြုများနေကြတဲ့ ကားများကို သုံးစွဲသူအကြိုက်နဲ့အညီ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ပြည်တွင်း ရှိနေထိုင်သူတို့ရဲ့ အရွေးရများ၊ အသုံးများကြတဲ့ကားတွေဟာ ဆီစားသက်သာ၊ အကြမ်းခံပြီး အသုံးပြုရတာ အဆင်ပြေတဲ့ ကားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် အင်ဂျင်ထဲမှာဆိုရင် လူစီး၊ အိမ်စီး၊ ခရီးသည်တင်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျတော်တို့ ဆီစားသက်သာတဲ့ ၁၃၀၀ စီစီနဲ့ ၁၅၀၀ စီစီကားတွေကို မှာယူသုံးစွဲကြပါတယ်။ အချင်းချင်း ပြန်လည် ဈေးသတ်မှတ်ပြီး ရောင်းချသလို ဂျပန် လေလံတွေကလည်း ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မှာယူကြပါတယ်။
တစ်ချို့တွေဆို ရိူးရွန်လေလံတွေကနေမှာယူပြီး ဒီမှာ ရှိတဲ့ ကားဈေးကွက် ၀ယ်ရောင်းတွေမှာ ပြန်ရောင်းကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ သုံးစွဲသူ အကြိုက်အရ မှာယူပြီးတော့ပေါ့။ အသွင်းများကြတာက ၁၃၀၀ စီစီအင်ဂျင်ရှိတဲ့ကားတွေပါပဲ။ အခွန်က ၁၃၅၀ စီစီအောက် ဘယ်ကား မဆို USD 5000 နဲ့ ဆောင်ရတာ ဖြစ်လို့ အခွန်က သက်သာပါတယ်။ ၁၃၀၀ စီစီ အင်ဂျင်တွေကို အများဆုံး မှာယူမူ အနောက်မှာတော့ ၁၅၀၀ စီစီ အင်ဂျင်တွေကိုလည်း ရွေးချယ်လာကြပါတယ်။ ၁၈၀၀ စီစီဆိုလျှင်တော့ လိုက်ထရပ် ထရပ်တွေ ဖက်ကို ရနိင်တဲ့ အင်ဂျင် ဖြစ်သွားလို့ပါ။
တိုယိုတာ ထဲကဆိုလျှင် ပရိုဘောက်၊ ဟာရီယာ၊ အပဆမ်၊ ကိုရိုလာ၊ဘယ်တာ၊ ပရိုဘောက် ဆတ်စီ၊ ခရောင်း တို့ဖြစ်ပြီး နစ်ဆန်းထဲကဆိုလျှင် နစ်ဆန်း အေဒီ ဗန် ၊ ဟွန်ဒါထဲကဆိုလျှင် ဟွန်ဒါ အဲဝေ့လ်၊ ဖက်ရှ်၊ စီအာဗီ၊ တို့ဖြစ်ပြီး ကိုးရီးယားကားထဲမှာ ဆိုလျှင် ဟွန်ဒိုင်း စန်တ ဖီ ရှိပါတယ်။ မော်ဒယ်တွေက တိုယိုတာ ပရိုဘောက်နဲ့ ဆတ်စီ ပရိုဘောက် တောင် မတူပါဘူး။ ဈေးကွာပါတယ်။ ကားအရှေ့ ဘန်ပါမှာ ပါးချိုင့် ပါမပါကို ကြည့်ခွဲတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဆတ်စီက ပါးချိုင့်နဲ့ပါ။ ၁၃၀၀ စီစီ၊ ၁၅၀၀ စီစီ တို့ကို ရနိင်ပြီး ဒီဇယ် အင်ဂျင် ဖြစ်တဲ့ ၁၄၀၀ စီစီမှာလည်း ရနိင်ပါတယ်။ ဟာရီယာနဲ့ အပဆမ်က လူစီးကားအကြီးအမျိုးအစားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုယိုတာ အပဆမ် ဆိုလျှင် လူ (၇) ယောက်စီး ဗန်ဖြစ်ပြီး စပေါ့ဗန်ထဲမှာပါ ၀င်ပါတယ်။ အင်ဂျင်ကတော့ ၂၀၀၀ စီစီကနေ စရှိပြီး ဒီဇယ်အင်ဂျင် ကို အတွေ့ရနည်းပါတယ်။
တိုယိုတာ ကယ်ဒီနား (ကြက်တူရွေး) က စက်ရုပ်ပုံပြောင်းကို ကျပ်သိန်း (၂၀၀) နီးပါးရှိမှာ ဖြစ်ပြီး
ဂရိတ် အသန့်လောက်ကို ရရှိနိင်မှာပါ။ တိုယိုတာ ဖီးလ်ဒါ တွေလည်း စလစ်ကပ် တွေကို ကျပ်သိန်း ၆၀၊ ၇၀ လောက်ဖြင့် စလစ်ပေး ၀ယ်ယူနိင်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိုဘောက်တွေလည်း သိန်း ၈၀ ၊ ၉၀ လောက်ပဲ ရှိပါတော့တယ်။ အင်ဂျင် ၁၈၀၀ စီစီ ဓာတ်ဆီမောင်းဖြစ်တဲ့ တိုယိုတာ Wish မော်ဒယ် ၂၀၀၉ ဆိုလျှင် ကျပ်သိန်း (၁၀၀) ပတ်ဝန်းကျင် ရှိပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ဈေးနှုန်းများမှာ ကားဂရိတ် ၊ လေလံ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် အနာအဆာတွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကွာဟမူ ရှိနေနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။